DXVK 1.8 inosvika kugadzirisa matambudziko nemamwe mazita, kuwanda-kutarisa rutsigiro kuvandudza uye nezvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Mushure menguva inodarika mwedzi miviri yekukura iyo nyowani vhezheni yeiyo DXVK 1.8 chirongwa chinoratidzwa, shanduro mairi zvigadziriso zvakagadzirwa kune mamwe mazita emitambo uye zvakare mukuita kwemitambo paIntel CPUs, kuwedzera kune tangisa kuvandudzwa kwekutsigira mamonitor akawanda uye zvimwe zvinhu.
Kune avo vasina kujaira chirongwa ichi, vanofanirwa kuziva kuti ndizvo chishandiso chakanakisa chinokwanisa kushandura Microsoft DirectX 11 uye DirectX 10 mifananidzo yakajeka kuVulkan, iyo yakavhurwa sosi yemifananidzo API inoenderana neLinux. Kuti ushandise DXVK, pamusoro peWine neVulkan, iwe uchave uchinyatso kuda iyo Vulkan-inoenderana GPU.
Ipo DXVK ichiri kushandiswa zvakanyanya paStam Play, haisi iyo yega nzvimbo vashandisi veLinux vanogona kutora mukana weiyi inoshamisa tekinoroji.
Inopawo iyo Vulkan-based D3D11 kuitiswa kweLinux neWine, Nezve kuita uye kugadzirisa paunenge uchimhanyisa Direct3D 11 mitambo muWine, sezvo ivo vachipawo rutsigiro rweDirect3D9.
1 Main makuru maficha eDXVK 1.8
2 Nzira yekuwedzera sei DXVK kutsigira kuLinux?
Main makuru maficha eDXVK 1.8
Mune iyi vhezheni itsva DXGI inosanganisira rutsigiro rwemazhinji-monita setups. Kuti igone kushanda nemazvo, unofanirwa kuisa vhezheni itsva yeWine nerutsigiro rweXRandR 1.4.
Kugadzirisa matambudziko nekumhanya mitambo pane masystem asina GPU yakaparadzana, Vulkan software yekushandisa iyo inoshandisa maCPU, senge Lavapipe, akanyorwa mune rondedzero yeva rasterizers.
Uyewo, Mune Direct3D 9 kuitiswa, maitiro ekurodha maturakiti uye kutarisa kutaridzika kwave kwakagadziriswa kuputirana zvinhu nezvimwe zvinhu. Yakagadziriswa nyaya nekusavimbika kudzoka kweiyo rondedzero yakatsigirwa skrini bhafa fomati (kumashure buffer).
Ndichiri kune rimwe divi, optimised mufananidzo dhizaini mashandiro anosimbiswas yekuvandudza mashandiro emimwe mitambo paIntel GPUs.
MuDirect3D 11, zvigadziriso zviri d3d11.enableRtOutputNanFixup (yezvekare shanduro dzeRADV driver) uye d3d11.invariantPosition (kugadzirisa anti-Z nyaya pane RDNA2 GPUs). Yakagadziriswa nyaya nereferensi kuverenga uye kubata null values ​​(NaN) mune mimvuri.
Yakagadziriswa yambiro paunenge uchigadzira nyowani vhezheni dzeMeson Toolkit.
Uye zvakare yakasimudzwa inyaya dzakagadziriswa muAtelier Ryza 2, Hondo Injini Aquila, Rima Mesia weMight & Mashiripiti, Everquest, F1 2018/2020, Hitman 3, Nioh 2, uye Tomb Raider Legend.
Finalmente kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo Nezve kuburitswa kutsva uku, unogona kutarisa ruzivo Mune inotevera chinongedzo.
Nzira yekuwedzera sei DXVK kutsigira kuLinux?
DXVK inogona kushandiswa kumhanyisa 3D mashandiro nemitambo paLinux uchishandisa Waini, ichiita senge yepamusoro-yekuita imwe nzira kune waini yakavakirwa-mukati Direct3D 11 kuitisa iyo inomhanya paOverGL.
DXVK inoda yazvino vhezheni yakagadzika yewaini kumhanya. Saka, kana iwe usina izvi zvakaiswa. Iye zvino isu tinongofanirwa kurodha pasi yazvino yakagadzikana DXVK package, isu tichaiwana iyi Mune inotevera chinongedzo.
Mushure mekuita kurodha pasi, izvozvi tava kuzunura pasuru ichangowanikwa, izvi zvinogona kuitwa kubva kune desktop desktop yako kana kubva kune iyo terminal pachayo nekuita unotevera kuraira:
Ipapo isu tinowana iyo folda ne:
Uye isu tinoita iyo sh raira ku mhanyisa iyo yekuisa script:
Paunenge uchiisa DXVK mune chirevo chekutanga cheWine. Mukana uyu ndewekuti Vini vkd3d inogona kushandiswa pamitambo yeD3D12 uye DXVK yemitambo yeD3D11.
Zvakare, iyo nyowani script inobvumidza iyo dll kuti iiswe sezviratidziro zvinongedzera, zvichiita kuti zvive nyore kugadzirisa iyo DXVK kuti uwane mamwe maWini prefixes (iwe unogona kuita izvi kuburikidza ne-- symlink raira).
Iwe uchaona sei dhairekitori DXVK ine mamwe maviri ma dlls emakumi matatu nematanhatu makumi matanhatu he tiri kuzovaisa zvinoenderana nenzira dzinotevera.
Iko "mushandisi" iwe unozvitsiva nezita rezita raunoshandisa mukugovera kwako kweLinux.
Kwemabhiti makumi matanhatu nemasere tinoaisa mukati:
Uye makumi matatu nematatu mu:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Graphics » DXVK 1.8 inouya kugadzirisa nyaya nemamwe mazita, akawanda-tarisa ekutsigira ekuvandudza, uye nezvimwe